Qoysaska Mudnaanta leh ee Dugsiyada Sare ee SPPS:
Sidii aan idinla wadaagnay toddobaadkii hore, SPPS waxay qorsheynaysaa inay waxbarashada qof ahaanta iskoolka la imaanayo u billowdo dhammaan ardayda fasallada 6-12 ee rabo waxbarashada laga billaabo Arbacada, April 14. Isniinta iyo Talaadada, April 12-13, waa maalmaha ay macallimiintu qorsheynayaan duruusta iyo fasallada. Sidii lagu ballamay, waxaan haynaa tafaasiil dheeraad ah oo kaa caawinaya inaad go'aansato in waxbarashada qof ahaaneed ama waxbarashada online-ka ah ay tahay mid u fiican ardaydaada.
Laga bilaabo Abriil 14, ardayda si shaqsi ah wax u barata waxay joogi doonaan dugsiga 4.5 saacadood Isniinta ilaa Khamiista, iyadoo 2 saacadood ee shaqada iskoolka lagu dhammayn doono guriga. Maalmaha Jimcaha waxay ardayda oo dhan u noqon doonaan maalmo ay qaataan waxbarashada durugsan, taasoo ay ku jiri karaan saacadaha shaqada oo la la kulmi karo macallimiinta marka lagu daro wakhtiga uu ardaygu qabanayo shaqo uu keligiisa u qabanayo si madax bannaan.
Jadwalka Qofka ee Isniinta ilaa Khamiista
8:30 subaxnimo - 1 galabnimo - Dhammaan fasalada 6-8 dugsi iyo Washington Technology Magnet
9:30 am-2 pm - Fasalada 6-8 ee iskuulada PreK-8
10:30 a.m-3 p.m. - Dhammaan iskoollada fasallada 6-12 iyo fasallada 9-12
2 saacadood oo waxbarasho madaxbanaan oo madaxbanaan - Dhammaan ardayda dhigata fasallada 6-12th ee dhammaan dugsiyada
Jimco: Barashada fogaan ee dhammaan ardayda dhigata fasallada 6-12aad
Fiiro gaar ah: Barnaamijyada waxbarashada gaarka ah ee Federal III waxay raaci doonaan jadwalkooda caadiga ah ee iskoollada sida buuxda u furan shan maalmood toddobaadkii. Maamulayaasha kiisaska waxbarashada gaarka ah ayaa la xiriiri doono qoysaska iyagoo siinayo macluumaad dheeri ah.
Waxbarashada Qof ahaaneed iyo Midda Khadka Intarnetka (Virtual)
Ardayda dhigata fasallada 6-12 ee rabta inay sii wataan waxbarashada online-ka ah saacadaha oo dhan ilaa inta ka harsan sannad-dugsiyeedka waxaa laga codsanayaa inay is qoraan ugu dambeyn Khamiista, March 11. Qoysaskii hore uga diiwaangaliyay ardaydooda dugsiyada sare iskoolka Virtual Learning School ama doorbiday inay ka baxaan barnaamijka caawinta waxbarasho ee qof ahaaneed waxaa laga doonayaa inay buuxiyaan foomkan haddii ardaygaagu doonayo inuu ku sii jiro waxbarashada online-ka ah.
Dedaal kasta ayaa la sameyn doonaa si loo hubiyo ardayda dugsiga sare inay waxbarashada la sii wataan macalimiintooda hadda haddii ay iskoolka u tegayaan waxbarasho qof ahaaneed ama mid online ah. Jaantuska hoose wuxuu bixinayaa dulmar guud oo ah sida barnaamij walba u ekaan doono:
Ardayda dugsiyada sare ee iska diiwaangeliso waxbarashada online-ka ah LAGUMA qorayo barnaamij kale oo gooni ah. Waxay kusii nagaan doonaan iskoolladooda ay hadda dhigtaan iyo fasallada ay hadda dhigtaan iyagoo la joogayo macallimiintooda hadba intii suurtagal ah. Dhammaan ardayda aan isku qorin waxbarashada online-ka ah waxaa loo qorsheyn doonaa inay galaan waxbarashada qof ahaanta iskoolka la imanayo markaynu iskoollada billawno April 14.
Tallaabooyinka Caafimaadka iyo Bedqabka
Iyadoo maanka lagu hayo ardayda qaadaneyso waxbarashada iskoolka la imanayo, degmada SPPS waxay raaci doontaa dhamaan tallaabooyinka caafimaadka iyo bed-qabka sida lagu sharraxay Qorshaha Waxbarashada leh Bedqabka ee Minnesota iyo SPPS COVID-19 Tilmaamaha Ardayda iyo Qoyska. Tan waxaa kamid ah:
Daboolidda wejiga ee ardayda iyo shaqaalaha
Nadiifin iyo Jeermis-tirtirid ah maalin kasta
Kuraas ardayda loo qoondeeyay xilliga wax la cunayo
Sameynta baaritaan caafimaad oo maalinle ah
Iyadoo la raacayo Qorshaha Waxbarashada Bedqabka leh, ardaydu waa inay kala fogaadaan 6 tallaabo oo ka mid ah fogaanta jireed oo midba midka kale ka fogaanayo mar kasta oo ay macquul tahay; marka aysan 6 tallaabo suurta gal ahayn, ugu yaraan fogaansho ah 3 tallaabo oo u dhaxeysa ardayda ayaa la sameyn doonaa.
Wixii xog dheeraad ah, fadlan booqo spps.org/reopen oo boggaas ka raadi war ka yimid degmada SPPS iyo iskoolka ardaygaaga dhowrka toddobaad ee soo socda.